Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay wasiirka arrimaha dibada Jamhuuriyada Islaamiga Mauritania - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay wasiirka arrimaha dibada Jamhuuriyada Islaamiga Mauritania
June 27, 2016 Puntland Mirror Somalia, South-Central 0
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud iyo wasiirka arrimaha dibada Mauritania, Mudane Isselkou Ould Ahmed Izid Bih.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta oo Isniin ah ku qaabilay xarunta madaxtooyada wasiirka arrimaha dibada Jumhuuriyada Islaamiga Mauritania, Mudane Isselkou Ould Ahmed Izid Bih oo booqasho ku yimid Soomaaliya.
Wasiirka ayaa Madaxweynaha soo gaarsiiyay martiqaad uu uga siday Madaxweynaha Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz, taasoo ku saabsanayd ka qaybgalka shir madaxeedka Jaamacada Carabta oo dhamaadka bisha dambe ka dhici doona magaalada Nouakchott ee caasimada dalka Mauritania.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa aqbalay martiqaadkaas isagoo sheegay in shirkaas uu muhiim u yahay Soomaaliya ayna ka qaybgali doonto.
Wasiirka arrimaha dibada Mauritania ayaa sheegay in dalkiisa uu markii ugu horeysay martigelin doono shir madaxeedka Jaamacada Carabta kaasoo ajandayaasha xooga lagu saarayo ay kamidtahay arrimaha Soomaaliya iyo sidii wadamada Carabta ay gacan taageero uga geysan lahaayeen wadanka Soomaaliya.
Ugu dambayna kulanka waxaa goobjoog ka ahaa wasiiru dowlaha arrimaha dibada dowlada federaalka Soomaaliya mudane Cumar Cali iyo masuuliyiin kale oo dowlada katirsan.